Shedeur Sanders, safiirka jaamacadda ee Beats headphones | Waxaan ka imid mac
Apple waxay had iyo jeer muhiimad weyn siisaa xayeysiinta, in kasta oo runtii ay aad ugu adag tahay inay ka hesho aaladaha sida Apple Watch ama iPhone, iskaba daa Macs. ka mid ah. Beats headphones waxay u baahan yihiin buunbuunintaas oo wuxuu had iyo jeer ku hareeraysan yahay xiddigo dhalaalaya si uu ugu dhawaaqo. Hadda wuxuu ku xeeran yahay xiddig curdin ah: Shedeur Sanders ardayga jaamacadda.
Beats -ka Apple ee qeybta Dre ayaa Arbacadii saxiixay qandaraas xayaysiis ah kaas oo ah xiddiggii ugu horreeyay ee mustaqbalka NFL, Waxaan ka hadalnaa Sedeur Sanders, oo ah kubbad -yaqaan caan ah oo ka socda Jaamacadda Jackson State University iyo ina halyeeyga NFL Deion Sanders. Beats wuxuu ku dhawaaqay midowga bartiisa twitter -ka oo uu ku soo dhaweynayo Sanders qoyska caanka ah. Fiidiyowga ku lifaaqan wuxuu arkaa dib -u -dhac Jaamacadda ka muuqda laba ka mid ah Studio Buds wuxuuna bixiyaa xoogaa ereyo dhiirrigelin ah marka uu jimicsanayo.
Ku soo dhowow qoyska Beats, @ShedeurSanders. Tani waa bilowga wax halyeey ah. pic.twitter.com/M0Cem3Tczn
- Beats by Dre (@beatsbydre) September 1, 2021
Way iska cadahay in Beats uusan ku wareersanayn inuu lammaane ahaan u yeesho ninkan dhallinyarada ah ee mustaqbalka soo kordhaya. Wuxuu had iyo jeer ku mashquulsanaa horay loo xaqiijiyay xiddigaha NBA tusaale ahaan LeBron James, Draymond Green iyo James Harden. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah kafaala -qaadayaasha kubbadda koleyga ee Mareykanka. Taasi waa sababta loo arko sida loo adeegsado sawirka ciyaartooyga oo weli ku jira Jaamacadda ayaa wax badan sheegaya.
Waxay u muuqataa taas Sedeur Sanders wuxuu leeyahay mustaqbal aad u wanaagsan, kaliya maahan sidii ciyaartoy NFL laakiin sidoo kale adduunka ganacsiga sida astaan ​​shaqsiyeed oo ka mid ah aaladaha ugu iibinta wanaagsan adduunka. Beats waxaa ka go'an tayada sidaas darteed waxaan heysanaa tayo muddo ah xiddiggan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shedeur Sanders, safiirka jaamacadda ee Beats headphones